सेयर बजार | Ratopati
सेयर बजारमा विकृत खेलोफड्को : दोष कसको ? access_timeभदौ २४, २०७८
पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा उतारचढाव आइरहँदा धितोपत्र बजार (सेयर मार्केट) मा पनि ठुलो तरङ्ग आएको छ । कारण झण्डै ३५ सय बिन्दु हाराहारी पुग्न लागिसकेको नेप्से एकाएक ओरालो लागिरहेको छ । यसले नै बजारमा तरङ्ग ल्याएको हो । यसको सम्पूर्ण दोष राष्ट्र बैङ्कले ल्याएक...
महामारीमा कसरी चम्कियो सेयर बजार ? access_timeभदौ १६, २०७८
२०७६ साल चैत महिनासम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ११/१२ सय अङ्कमा रुमल्लिइरहेको थियो । २०७३ साउन महिनामा १८ सय ८१ अङ्कको उच्च बिन्दुमा पुगेको नेप्से त्यसपछि करिब साढे तीन वर्षसम्म निरन्तर घटेर उक्त अङ्कमा आइपुगेको थियो । २०७६ पुसदेखि चीनको वुहानबाट फैलिएक...
१२ करोडभन्दा बढी सेयर कर्जा लिएका लगानीकर्ताले एक वर्षमा सीमामा ल्याउनुपर्ने access_timeभदौ ८, २०७८
लगानीकर्ताहरूले सेयरमा लगानी गर्न लिएको १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा एक वर्ष भित्र सीमामा ल्याउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज (मंगलबार) निर्देशन जारी गर्दै कर्जा सीमामा ल्याउन समय सीमा तोकेको हो । यसअघि, केन्द्रीय बैङ्कले साउन अन्तिममा ल्याएको मौ...
सेयर बजारमा कारोबार उच्च हुँदा लगानीकर्ताभन्दा ब्रोकरको कमाइ बढी access_timeअसार ४, २०७८
निषेधाज्ञासँगै सेयर बजारमा अनलाइन कारोबार बढ्न थालेको छ । लगानीका अरू विकल्पलाई निषेधाज्ञाले असर गरिरहेको अवस्थामा सेयर बजारमा औसत १७ अर्बसम्मको कारोबार हुने गरेको छ । अनलाइन कारोबार भए पनि ब्रोकरको कमिसन भने लगानीकर्ताले तिरिरहेका छन् । औसत १७ अर्बको कारोबारलाई ...
दुईथरी सेयर लगानीकर्तालाई दुईथरी पुँजीगत लाभकर, कसलाई कति ? access_timeजेठ १९, २०७८
सरकारले सेयर बजारका लगानीकर्तालाई अल्पकालिन र दीर्घकालिन गरी पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको छ । आगामी बजेटले गरेको व्यवस्था अनुसार अब अल्पकालिन लगानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छ भने दीर्घकालिन लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्नेछ । १ वर्ष...
सेयर बजारमा सामान्य करेक्सन access_timeजेठ ११, २०७८
लगातार आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गरेको सेयर बजारमा मंगलबार भने सामान्य करेक्सन आएको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक ६.५० अंकले घटेर २८१६.५६ बिन्दुमा आइपुगेको छ । ०.२३ प्रतिशतले घटेको बजारमा ११ अर्ब १३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । यस दिन २१९ कम्पनी का...
यी कम्पनीको सेयर मूल्य किन हुन्छ सर्वाधिक महँगो ? access_timeचैत १५, २०७७
सेयर बजारमा अहिले कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य सर्वाधिक महँगो छ भने त्यो हो युनिलिभर कम्पनी । बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरको सेयर मूल्य अकस्मात बढेर सर्वाधिक महँगो भएको भने होइन । सेयर बजारमा महँगो सेयर भएको कम्पनीको सूचीमा लामो समयदेखि युनिलिभर रहँदै आएको छ । हाल य...
सेयर बजारबाट लगानीकर्तासँगै सरकार पनि फाइदामा access_timeचैत ५, २०७७
सरकारले सेयर बजारबाट हालसम्मकै उच्च पुँजीगत लाभकर उठाएको छ । पछिल्लो समय सेयर बजार बढ्दै गएपछि सरकारले पाउँने पुँजीगत लाभकर पनि बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा (२०७७/७८) नै सेयर बजार बढेर २६ सय अंकसम्म पुगेको थियो । सेयर लगानीकर्ताले पनि यस बर्ष सबै...
सेयर बजार पस्नेले जान्नै पर्ने ‘क्लोज आउट’ : कसरी कारबाहीमा परिन्छ ? access_timeफागुन ११, २०७७
सेयर बजारमा लगानीको तयारी गरिरहेका र लगानीमा प्रवेश गरिसकेका कतिपयलाई ‘क्लोज आउट’ बारे जानकारी नहुन सक्छ । क्लोज आउटबारे जानकारी नहुँदा कतिबेला कारबाहीमा परिन्छ सो को समेत हेक्का हुँदैन । आफुसँग नभएको सेयर बिक्री गरे सो कारोबार क्लोज आ...
सेयरमा लगानी गर्न के-के कुरामा ध्यान दिने ? access_timeफागुन ९, २०७७
सेयर बजारप्रति आम मानिसको चासो बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय बजारले कीर्तिमान पनि कायम गरिरहेको छ । चन्द्रागिरि हिल्स र नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैङ्कको आईपीओले मानिसहरुको ध्यान सेयर बजारमा खिच्न मदत पुगेको छ । अहिले सार्वजनिक स्थल, घर, कार्यालय जहाँतहीँ सेयर बजारकै...
‘ब्ल्याङ्क चेक’को भरमा अर्बौंको सेयर कारोबार access_timeमाघ २०, २०७७
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशन बमोजिम नेप्सेले शुक्रबार सबै ब्रोकरलाई धितोपत्र कारोबार सञ्चालन नियमावली अनुसार अग्रिम रकम भुक्तानी लिएर मात्रै सेयर कारोबार गर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागु गर्न निर्देशन दियो । नियामक निकायहरुको यो निर्देशनले सेयर बजारमा एक प्...
सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको ब्रोकर कमिसन घट्यो, अब कति लाग्छ ? access_timeपुस १०, २०७७
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको कमिसन घटाएको छ । बोर्डले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यसअघि लाग्दै आएको कमिसनमा ३३ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र ६० प्रतिशत घटाएको हो । बोर्डले सानो रकमको कारोबार गर्ने साना लगानीकर्तालाई कारोबार सेवाबाप...
सुस्ताउन थाल्यो सेयर कारोबार, यो साता ५६ प्रतिशतको गिरावट access_timeमंसिर २७, २०७७
काठमाडौं । सेयर बजारको कारोबार सुस्ताउन थालेको छ । अघिल्लो हप्ता दैनिक ८ अर्बभन्दा बढी औसत कारोबार रहेको बजारमा यो साता ४ अर्ब भन्दा कम कारोबार भएको हो । यो साता नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा १८ अर्ब २ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । अघिल्लो साता यस्तो का...
नेप्सेमा कुमारी बैंक, साल्ट ट्रेडिङ र रिडि हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य समायोजन access_timeमंसिर १५, २०७७
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा तीन वटा कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजना भएको छ । कुमारी बैंक, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन र रिडी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य समायोजन भएको हो । यी तीनै कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बुकक्लोज गरेसँगै नेप्सेले शेयर मूल्य समायोजन ग...
सेयर बजारमा लगानीकर्ताका सङ्घ धेरै भए, बजारको निष्पक्षतामै शङ्का access_timeअसोज ६, २०७७
कोरोना महामारीको प्रभावबाट धेरैजसो देशलाई छोएको छ । अहिले सबैतिर कोभिडको प्रभाव परेको र अर्थन्त्र डामाडोल भएको अवस्थामा पनि सेयर बजारमा किन उछाल आइरहेको छ भन्ने विषयमा आम चासो छ । सबैतिर प्रभाव पारेको अवस्थामा सेयर बजार घट्नै पर्ने हो भन्ने एउटा अनुमान मा...
नेप्सेले समयमै समस्या नसल्ट्याउँदा पुँजी बजारको २० खर्ब जोखिममा access_timeभदौ २८, २०७७
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सिस्टममा पटक—पटक समस्या आउँदा २० खर्बको पुँजी बजार जोखिमतिर धकेलिएको छ । सेयर कारोबार अनलाइन प्रणालीबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको आगामी कात्तिकमा २ वर्ष पुग्नेछ । तर, अनलाइन प्रणाली सुरु भएदेखिनै सो प्रणालीमा समस्यै समस्या देखि...
बढ्दै लगानीकर्ताको मनोबल : सेयर बजारमा २१ अंकको उछाल, २ अर्बको कारोबार access_timeभदौ ८, २०७७
काठमाडौं । सेयर बजारमा २१ अंकको उछाल आएको छ । कोरोनाको महामारीका बीच देशका अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा जारी रहँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज परिसूचक नेप्से २१.२६ अंकले बढेर १ हजार ४ सय ३१ अंकमा पुगेको हो । परिसूचकम मात्रै नभएर कारोबार समेत २ अर्ब रुपैंया नाघेको छ ।&n...
धितोपत्र बजार : नेप्सेमा सामान्य वृद्धि access_timeसाउन २८, २०७७
धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से १.५१ अङ्कले बढेर एक हजार ४२५.३२ मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०.०२ अङ्कले बढेर २९७.२९ मा पुगेको छ । स्टकका अनुसार आज कूल १८८ क...
समाज लघुवित्तको ८० हजार ७ सय कित्ता सेयर भदौ ४ बाट बिक्री खुला हुने access_timeसाउन २८, २०७७
काठमाडौं । समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाले भदौ ४ गतेबाट आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा समाजले ८६ हजार कित्ता आइपीओ जारी गर्न लागेको हो । यसमध्ये १ हजार कित्ता अर्थात जारी पुँजीको ५५ कर्मचारीहरुका लागि र कुल निष्कासनको ५५ अर्...
एक वर्षमा दोस्रो बजारमा ११० अर्बको सेयर थपियो access_timeसाउन २४, २०७७
काठमाडौं । दोस्रो बजारमा एक वर्षमा १ खर्ब १० रुपैयाँ बराबरका सेयर थपिएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ सय ३६ वटा स्क्रिपका ९९ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख कित्ता बराबरको स्टक सूचीकृत भएका हुन् । सो आर्थिक वर्षमा १३६ कम्पनी मध्ये ८१ कम्पनीले बोनस...
मेयरलाई मुक्का हान्ने पक्राउ
सुनिलको नयाँ गीत ‘निर हो’ सार्वजनिक (भिडियो)